Ixabiso eliphantsi lomnyango wealuminium kunye neefestile zokwenza iifektri mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Ukuphuhliswa kweengcango zealuminium kunye neefestile Ingcango yealuminium kunye neefestile, ukwakha ishishini lamakhethini eludongeni yinto entsha kwilizwe lethu, ukusuka ekuqaleni, ukusuka kwincinci ukuya enkulu, kuphumelele ukukhula ngokukhawuleza ngokuxhuma kunye nemida.
Umnyango weAluminiyam kunye nefestile ekhutshiweyo
Kumashumi nje ambalwa eminyaka, umzi-mveliso usebenzise ubuchwepheshe obuphambili ukukhuthaza uhlengahlengiso kulwakhiwo lwamashishini, ukukhuthaza imveliso, ukwenziwa kwenkqubo yokwakha, ukuqonda isayensi kunye netekhnoloji, kunye nokunciphisa umsantsa kwinqanaba eliphambili lamazwe aphesheya. Umnyango welizwe lam ialuminiyam kunye nefestile yokwakha amakhethini eludongeni ikhe yafumana uphuhliso oluzukileyo. Iingcango zealuminium kunye neefestile ziyimveliso yophuhliso lwezixhobo ezitsha zangoku zokwakha. Zenziwe kumazwe ahambele phambili afana neJamani, iUnited States, kunye ne-United Kingdom kwangoko kwiminyaka ye-1930. Ngenxa yokuba iiprofayili zealuminium alloy kwimathiriyeli, zinokukhupha iiprofayili ezinemilo enqamlezileyo, ngakumbi ialuminium Inkangeleko entle yeengcango zentsimbi kunye neefestile kunye nezakhiwo zazo ezigqwesileyo zibenze baqinisekiswa ngabayili bezakhiwo.
Iimpawu zeprofayili yeAluminiyam
Ukuxhathisa umhlwa we-Aluminium: Ubuninzi beprofayili ye-aluminium yi-2.7g / cm3 kuphela, emalunga ne-1/3 yobunzima bentsimbi, ubhedu okanye ubhedu (7.83g / cm3, 8.93g / cm3, ngokwahlukeneyo). Phantsi kweemeko ezininzi zokusingqongileyo, kubandakanya umoya, amanzi (okanye amanzi etyuwa), i-petrochemical kunye neenkqubo ezininzi zeekhemikhali, i-aluminium inokubonisa ukumelana nokubola.
Ukuqhutywa kweprofayili yeAluminiyam: Iprofayile yeAluminiyam ihlala ikhethwa ngenxa yokuqhuba kwayo ngokugqwesileyo. Ngokobunzima obulinganayo, ukuhanjiswa kwealuminium kufutshane ne-1/2 yobhedu.
Ukuqhutywa kwe-Thermal: Ukuqhutywa kwe-thermal yealuminium ingxubevange malunga ne-50-60% yobhedu, eluncedo ekwenzeni ukutshintsha kobushushu, i-evaporators, izixhobo zokufudumeza, izixhobo zokupheka, kunye neentloko zezilinda kunye neeradiator.
I-non-ferromagnetic: Iiprofayili zeAluminiyam aziyi-ferromagnetic, into ebalulekileyo kumashishini kagesi kunye ne-elektroniki. Iiprofayili zeAluminiyam azicimi ngokukhawuleza, nto leyo ebalulekileyo ekusetyenzisweni kokubandakanya ukuphatha okanye ukunxibelelana nezinto ezinokutsha neziqhumayo.
Ukusebenza: Ukusebenza kweeprofayili zealuminium kuhle kakhulu. Kwiindawo ezahlukeneyo zealuminium ekhubazekileyo kunye nealloys zealuminium, kunye nakwimimandla eyahlukeneyo ezi alloys ziye zenziwa emva kokuveliswa, iimpawu zoomatshini ziyahluka kakhulu, ezifuna izixhobo ezikhethekileyo zomatshini okanye itekhnoloji.
Ukuzinza: Amandla athile eqine, amandla okuvelisa, ukungasebenzi kakuhle kunye nenqanaba lomsebenzi ohambelana nokulawula uguquko kwisimo esivumelekileyo.
Ukuphinda isebenze kwakhona: I-Aluminium inokuphinda isebenze kwakhona, kwaye iimpawu ze-aluminium e-recycled ziphantse zingahlukaniswa kwi-aluminium yokuqala.
Njengoko iindawo zealuminium zingaba kwindawo yokusebenza enomswakama okanye zidityaniswe namanye amacandelo ezinto ezahlukeneyo, ukuze kuphuculwe kwaye kuqinisekiswe ukunganyangeki, ukumelana nokubola kunye nokubonakala kweendawo, iinxalenye ze-magnesium alloy kufuneka ziphathwe ngaphezulu. Ukunyangwa kwangaphambili kuya kuchaphazela ukutshiza okulandelayo. Ngexesha lenkqubo yokuvelisa, iinxalenye zinokungcoliswa zezinye izinto ezifana negrisi, ii-oxide, izinto zokuthambisa kunye nomcimbi wangaphandle, kwaye oku kungcola okushiyekileyo kufuneka kususwe.
Ngokubanzi, ukuhanjiswa kwangaphambili kweendawo zealuminium zingahlulahlulwa ngokwamacandelo amane: ukucoca ngomatshini, ukucoca izinyibilikisi, ukucoca ilye kunye nokucoca iasidi. Ezi ndlela zinokusetyenziswa zodwa okanye ngokudibeneyo. Nika ingqalelo unikezelo lomgubo esirhabaxa kunye namanzi ngexesha lenkqubo ipolishi, kwaye ipolishi kufuneka ikhanye kakhulu!
Elungiselelweyo aluminium ingxubevange emnyango kunye window extrusion iindawo
Izinto eziphathekayo I-aluminium alloy (izinto ozikhethelayo)
Ukunyamezelana +/- 0.01mm
Unyango oluphezulu Unyango oluqhelekileyo lweekhemikhali kwii-aluminium alloys lubandakanya i-chromization, ipeyinti, i-electroplating, anodizing, kunye neelectrophoresis. Phakathi kwabo, unyango olwenziwa ngoomatshini lubandakanya ukuzoba ucingo, ipolishi, ukubetheka kwesanti kunye nokuphola.
Inkqubo ephambili Ukuzalisa isigaba se-extrusion; Inqanaba lesigaba sokudlulisa; Inqanaba lesiphithiphithi sokukhupha.
Ulawulo lwemeko Ulawulo lomgangatho olungqongqo kuyo yonke inkqubo yokulungelelanisa umatshini wokulinganisa ukusuka kwinto ukuya kupakisho.
Ukusetyenziswa Abatshintshi, i-evaporators, izixhobo zokufudumeza, izixhobo zokupheka, kunye neentloko zeesilinda zeemoto kunye neeradiator, njl.
Imizobo yesiqhelo Yamkela i-CAD ngokuzenzekelayo, i-JPEG, i-PDF, i-STP, i-IGS kunye nezinye iifomati zeefayile.
Egqithileyo Amacandelo e-Electroplated aluminium alloy
Okulandelayo: CNC yokugaya iinxalenye Stainless